Stick War: Legacy 1.11.71 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.11.71 လြန္ခဲ့ေသာ4ရက္က
ဂိမ္းမ်ား နည္းဗ်ဴဟာ Stick War: Legacy
Stick War: Legacy ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အားလုံးအချိန်အမြင့်ဆုံးလူကြိုက်အများဆုံးနှင့် rated က်ဘ်ဆိုက်ဂိမ်းများကိုတစ်ခုမှာယခုမိုဘိုင်းမှကြွလာ!
ဂိမ်း Stick စစ်ပွဲ, အကြီးမားဆုံးအများစုပျော်စရာ, စိန်ခေါ်မှုနှင့်အဖြစ်လို့ချောင်းကိုပုံဂိမ်းတွေထဲက Play ။ သငျသညျတိုင်း stickman စုစုပေါင်းထိန်းချုပ်မှုရှိသည်, ဖွဲ့စည်းမှု၌သင်တို့၏စစ်တပ်ထိန်းချုပ်သို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီယူနစ်ကစား။ ယူနစ် Build, သတ္တုတွင်းရွှေ, ဓား, လှံ, Archer, မာဂုပညာရှိများနှင့်ပင်ဧရာ၏လမ်းသင်ယူကြသည်။ ရန်သူရုပ်တုကိုဖွိုဖကျြအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, နယ်မြေကိုဖမ်းယူ!
●ရေခွံယခုအားလုံးဇာတ်ကောင်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါ! မိမိတို့မူထူးခြားတဲ့အခွင့်အရေးနှင့်အတူအသီးအသီးအစွမ်းထက်လက်နက်နှင့်လက်နက် Unlock!
●ဗေ့ခ်ျအရေခွံတိုက်ခိုက်မှုအမြန်နှုန်း, သွက်လက်နှင့် Stun လျှော့ချရေးတိုးတက် Dead သူတို့ကိုဆုကြေးငွေဝတ်ဆင်သောသူတို့အားပေးကမ်းမှော်သောတိရစ္ဆာန်တို့၏အရိုးနှင့်သားမွေးထဲကနေကိုဖန်ဆင်းနေကြသည်။
● Vamp အရေခွံ Inamorta ၏အမှောင်မှော်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး Chaos ၏တနျခိုး, ဆံ့ဆိုသည်။ Vamp လက်နက်နှင့်လက်နက်ခိုးယူအဆိပ်ကိုယ်ခံစွမ်းအားနှင့်နီးကပ်လွန်းလာသောသူအပေါင်းတို့မှပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမှာသုတျသင့်ရဲ့ယူနစ်အသက်တာ၏တန်ခိုးကိုပေးလေ့ရှိသည်။
●အဆုံးမဲ့ Dead ရှင်သန်မှု mode ကို zombie! သငျသညျဘယ်နှစ်ယောက်ညကြာရှည်နိုင်သလဲ
အဆုံးမဲ့ Dead များအတွက်●ရုပ်ပြစာအုပ်စတိုင်ရုပ်ရှင်မိတ်ဆက်ခြင်း!
●ပြိုင်ပွဲ mode ကို! အဆိုပါအနိုင်ရအာဣမြို့စိန်ခေါ်သူများများစွာအားဖြင့်သင်တို့၏လမ်းတိုက်ဖျက် "Inamorta ၏သရဖူ!"
ကင်ပိန်း Mode ကို:
တစ်ကမ်ဘာပျေါတှငျသငျသညျကိုသူတို့တစ်ဦးချင်းစီတိုင်းအပြည်ပြည်နည်းပညာနှင့်ကြီးစိုးများအတွက်ရုန်းကန်ဖို့ကျိန်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုလူအမျိုးမျိုးကဝိုင်းနေတာ, Inamorta တောင်းဆိုခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့ခုခံကာကွယ်ဖို့လမ်းနှင့်တိုက်ခိုက်မှုတီထွင်ခဲ့သည်။ သူတို့ဘာသာကိုမှလက်နက်များလှည့်, ကိုးကှယျခွငျး၏အချက်မှအစွဲအလမ်းဖြစ်လာကြပါပြီသူတို့၏ထူးခြားသောယာဉ်၏မာနထောင်လွှား။ တစ်ခုချင်းစီကိုသူတို့ရဲ့ဘဝလမ်းတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်တယ်, သင်ကသိကြလိမ့်မည်ကဲ့သို့ရှိခေါင်းဆောင်များဘုရားသခငျ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအဖြစ်တောင်းဆို, အဘယ်ကတဆင့်အခြားသောလူမျိုးတို့ကသူတို့ဒေသခံဆုံးမဩဝါဒပေးဖို့ဆက်ကပ်အပ်နှံထားရှိပါသည် ... စစ်ကယုံကြည်ကြသည်။
"Archidons" ဟုအဆိုပါလေးသမား၏လမ်း, "Swordwrath" ဟုဓားကိုရာလမ်း, "Magikill" မာဂုပညာရှိ၏လမ်း, နှင့် "Speartons" ဟုအဆိုပါလှံ၏လမ်း: အဆိုပါအခြားသူတွေအဖြစ်လူသိများကြသည်။
သငျသညျသငျ၏လူတပါးသောဘုရားအဖြစ်ကိုသူတို့ကလက်နက်မကိုးကွယ်ကြဘူးသင့်ရဲ့သွားရာလမ်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အသိပညာ၏ "ဟုအမိန့်" ဟုခေါ်သည့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်, ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာသင်ပတျဝနျးကငျြလူမျိုးစိမျ့များအတွက်အမှတ်အသားကိုမှန်ကန်စေသည်။ ခုခံကာကွယ်ရန်သင့်သာအခွင့်အလမ်းကိုပထမဆုံးတိုက်ခိုက်ရန်နှင့်နည်းပညာရဲ့အသီးအသီးလူမြိုးထဲကလမ်းတစ်လျှောက်ရယူရန်ဖြစ်ပါသည်။
Stick War: Legacy အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Stick War: Legacy အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Stick War: Legacy အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Stick War: Legacy အား အခ်က္ျပပါ
premiumapp စတိုး 1.79k 2.09M
Stick War: Legacy ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Stick War: Legacy အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.11.71
ထုတ်လုပ်သူ Max Games Studios
File Size: 107.53MB
Release date: 2019-08-14 17:18:36
လက်မှတ် SHA1: ED:80:1E:A7:2C:34:11:7E:6B:EA:E7:39:4B:78:5E:FC:A8:0A:F5:6B
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Jason Whitham
အဖွဲ့အစည်း (O): Max Games Studios
နယ်မြေ (L): Edmonton
Stick War: Legacy APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ